ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး Installation လမ်းညွှန် - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » installation » ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး Installation လမ်းညွှန်
လက်ရှိအသုံးပြုမှုဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာနေသည်။ သင်က install လုပ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး အိမ်မှာ။ တကယ်တော့၎င်း၏ installation ကိုအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်အောင်မြင်နိုင်လျှင်, သင်ကအလွန်လှပသောခြံစည်းရိုးနှင့်အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့တစ်ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးကိုတပ်ဆင်ရန်တိကျသောခြေလှမ်းများမှာကြည့်ယူကြကုန်အံ့။
အဘယ်အရာကိုဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ငါ၏အ Landscaping နှင့်ငါ့အိမ်ရဲ့ဗိသုကာနှင့်အတူရောနှောနေခြင်းပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုစတိုင်နှင့်ပစ္စည်း?
ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးခြံစည်းရိုးတစ်အတော်လေးအသစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသစ်သား panel ကိုနှင့်ရထားလမ်းခြံစည်းရိုးနှစ်ခုလုံးနှင့်ဆင်တူပုံစံများကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးသစ်သားခြံစည်းရိုးနိုင်ပါတယ်အဖြစ်နွမ်းသို့မဟုတ်ရာသီဥတုနှင့်အချိန်တခြားဆိုးကျိုးများ, ကားပုပ်ပျက်တတ်ဖို့ဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဗီနိုင်းတစ်ခုဆွဲဆောင်မှု, ကိုအလွယ်တကူထိန်းသိမ်းထားခြံစည်းရိုးစနစ်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ကောင်းသောပစ္စည်းများနှင့်စတိုင်များရွေးချယ်ခြင်းကောင်းတစ်ဦးရဲ့နောက်ဆုံး installation ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
သင်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုင်းနှင့်ဥပဒေရေးရာဆုတ်ယုတ်မှုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ပြီးတာနဲ့ခြံစည်းရိုး၏တည်နေရာထွက်မှတ်။ မာကုမှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်နှင့်အတူထောင့် post ကိုပေါက်တွေရဲ့တည်နေရာ။ အညီအမျှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 'မှာလှပတဲ့တိုင်များအကြားအကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်, Mark ကျန်ရှိနေသေးသောလိုင်းရေးသားချက်များ၏တည်နေရာ။ ဒါကြောင့်အစပိုင်းမှာပိုပြီးကုန်ကျသော်လည်းသူကပိုရှည်ကြာနီးပါးမျှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သောကြောင့်, ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးသူ့ဟာသူအဘို့အချေ။ အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးနိုင်ပါတယ်ရှေ့တော်၌ထိုပို့စ်များကိုရရှိထားသူကြောင်းကွန်ကရစ်ခိုင်မာစေရန်အချိန်လိုအပ်သည်။ ဂရုတစိုက်ခြံစည်းရိုး၏တည်နေရာစီစဉ်, သင် undo ရန်ခက်ခဲဖြစ်အံ့သောငှါအကုန်အကျအမှားတွေကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။
တစ် post ကိုပေါက် digger အသုံးပြုခြင်း, တွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 24 & quote တူး; နက်ရှိုင်းသော 10 & quote; အချင်း။ ရေနုတ်မြောင်းအဘို့အတွင်း၏အောက်ခြေမှကျောက်စရစ်အနည်းငယ်လက်မထည့်ပါ။ တွင်း၌ထောင့်ပို့စ်များကိုထည့်ပါ။ တိုင်အဆင့်နှင့်မှန်ထုပ်များမှာအာမခံပါသည်။ ယာယီ2& quote နှင့်အတူပို့စ်များကို Brace; x က4& quote; ထိပ်နှင့်မြေပြင် post မှပူးတွဲ့။
တစ်ဦး String လိုင်း Run
ထောင့်ပို့စ်များကိုထိပ်အနားကနေတစ်ဦး string ကိုလိုင်း run လိုက်ပါ။ string ကို taut နှင့်အဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒီအတိုင်အားလုံးအတူတူပင်အမြင့်မှာ installed ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမှန်ထုပ်နှင့်ထောင့်ပို့စ်များကိုကဲ့သို့တူညီသောအမြင့်မှာကြောင်းစစ်ဆေးနေကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့လိုင်းပို့စ်များကို Install လုပ်ပါ။
ခြံစည်းရိုး Panel များစည်းဝေး
ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးပြားတစ်အောက်ခြေရထားလမ်းထိပ်တန်းရထားလမ်းနှင့် slats ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းသူတို့ကိုစုဝေး။ ခြံစည်းရိုး၏ရေးသားချက်များအပေါ်သင့်လျော်သောတွင်းထဲသို့ထိပ်ဖျားနဲ့အောက်ဆုံးသံလမ်းကြီးစွန်းတိုင်အောင် SNAP ။
ထုတ်လုပ်သူရဲ့လမ်းညွန်သည်နှင့်အညီအစာရှောင်ခြင်း-ခြောက်သွေ့ဘိလပ်မြေရောထွေးနှင့်တွင်း၌လောင်း။2& quote Leave; x က4& quote; အဆိုပါဘိလပ်မြေကုသနေစဉ်အတွင်းနေ့ချင်းညချင်းရာအရပျထဲမှာပြင်ဆင်ထား။ အဆိုပါ Brace ဖယ်ရှားပါ။ ပို့စ်ထုပ်၏အတွင်းပိုင်းမှဘိလပ်မြေ Apply ပြီးတော့ရေးသားချက်များပေါ်ကနေ install လုပ်ပါ။
·တဲ့ဆင်ခြေလျှောပေါ်မှာဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးကို Install လုပ်ခြင်းခြေလှမ်းနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်ပါတယ်: တစ်ဦးချင်းစီပင်လယ်အော်အပိုင်းတူညီတဲ့အရှည်သည်နှင့်သံလမ်းအဆင့်အထိအစား၏ဆင်ခြေလျှောဖို့အပြိုင်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ခြံစည်းရိုးတဖြည်းဖြည်းလျှောစောက်ထလုပ်ပါ။
အဆိုပါအထက်ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုးကို install များအတွက်တိကျသောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ခြံစည်းရိုးကိုဖြည့်ဖို့ဒီခြေလှမ်းကိုလိုက်နာပါ! သင်ဆဲခြံစည်းရိုးကို install အကြောင်းကိုမသိလျှင်, သင်အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနိုင်ပါသည်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးခွန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များမျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးကို Install လုပ်နည်း ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်ခြင်း ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး Install အဆိုပါဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးများတပ်ဆင် ဗီနိုင်းပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်ခအကြံပေးချက်များ